सौताको रिसले पोइको खुट्टो चैट ! - Jhilko
सौताको रिसले पोइको खुट्टो चैट !
सौताको रिसले पोइको काख विगारेको तुक्का त सुनि ल्याइएकै हो । तर, सौताको रिसले पोइको खुट्टो भाँचेको कथा भने नौलो हो । उनै विश्वप्रकाशले यो कथालाई नयाँ ढाँचामा कथेर दूनिया दिवाना गराए ।
कथा अनुसार एकादेशमा एक जना मानिसको दूइटी श्रीमती रहेछन । दूवै सौता अचाक्ली झगडालु रहेछन् । एकदिन लोग्नेले दुवैलाई धनसम्पत्ति अंशबण्डा गराएर छुट्याइ दिएछन् । आफुलाई स्याहार सुसार गर्न पनि शरीरका अंगप्रत्यंग बाँडफाँड गरिदिएछन् । जस अनुसार दाहिने खुट्टोमा तेल लगाउने जिम्मा जेठीको र देब्रे खुट्टो मालिस गर्ने जिम्मा कान्छीको भागमा परेछ ।
यसरी नै दिन वित्दै गएको थियो । एक दिन अचानक जेठीको माइत जाने काम परेर हिँडिछ । उनी गएदेखि दाहिने खुट्टोमा तेल मालिस गर्ने काम रोकिएछ । एक दिनको कुरो हो । बुढाले दाहिने खुट्टो मालिस गर्न कान्छिलाई अह्राएछन । तर कान्छिले जेठीको खुट्टो मालिस गर्ने कुरा त परै जाओस चिर्पटले हिर्काएर जेठीको अंशभागमा परेको दाहिने खुट्टो भचाँइ दिइछ ।
उता माइतिबाट जेठी आएर हेर्दा आफ्नो भागको दाहिने खुट्टो भाँचिदिएको झोँकमा उनले पनि कान्छिको अंश भागमा परेको देब्रे खुट्टो पनि भाँचि दिइछ । यसरी सौताको कारण बुढा थला परेछन ।
यो प्रसंग शर्माले सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) र विप्लव नेतृत्वको नेकपाको लडाँइ सौताको लडाइले बुढा थला परेझै कम्युनिस्ट सिद्धिदै गएको अर्थमा भने । तर उपस्थित स्रोताहरुले यो कथालाई सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको लडाँइले लोकतन्त्र नै घाइते हुने अर्थमा बुझे । आखिर कथाको सार त्यस्तै हुने होइन र ?
शेयरबजार करेक्सन मुडमा
महिला भलिबलमा नेपाल भारतसँग पराजित
दीगो विकास लक्ष्य पूरा गर्न दैनिक साढे पाँच अर्बको लगानी...
संयुक्त राष्ट्र संघसमर्थित विश्वव्यापी अभियान अन्तर्गतको दीगो विकास लक्ष्य पूरा...
पहिरो अध्ययन गर्न खानी तथा भूगर्भ विभागको टोली गुल्मीमा
पहिरो गएको क्षेत्रको अध्ययन गर्न खानी तथा भूगर्भ विभागको टोली आज गुल्मी आइपुगेको...
महाकालीमा पुल निर्माणको काम तिब्र
र्ष दिनमा छ महिना (पुसदेखि जेठसम्म) कामले गति लिने गरेको बताउँदै पुल निर्माण कम्पनीले...
नेकपाको स्थायी कमिटी बैठक धुम्बाराहीमा
केन्द्रीय कमिटी बैठक बोलाउने, नेपाल भारत सीमा विवाद, विधान संशोधन र अन्य गरी पाँच...